(Sawirro+Warbixin) Madaxweynaha dowladda Puntland oo xariga ka jaray carwada bandhiga buugaagta ee Garowe. | puntlandi.com
Thursday, July 28th, 2016 | Posted by Pi
(Sawirro+Warbixin) Madaxweynaha dowladda Puntland oo xariga ka jaray carwada bandhiga buugaagta ee Garowe.
(Pi Garowe) Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta xariga ka jaray carwada bandhiga buugaagta ee magaalada Garowe, taasoo ay ka qeyb galeen masuuliyiin kala duwan iyo dadweyne aad u badan oo xiisanayay inay ka faa’idaystaan buugaagta cilmiga ka buuxo ee madasha lagusoo bandhigay.
Bandhigaan oo ay iska kaashadeen machadka SIDRA iyo shirkada daabacaada ScanSom ayaa ah midkii ugu weynaa ee lagu qabto Puntland waxaana lagusoo bandhigay 572 buugaag ah oo diiradda lagu saarayey dhaqanka soo jireenka ah ee Soomaalida, Murtida Soomaalida iyo Hodontinimada Afka Soomaaliga. Sidoo kale waxaa madasha ku sugnaa 46 qoraayaal ah oo isaga kala yimid dalka iyo dibadiisa.
Agaasimaha machadka horumatinta cilmi baarista Soomaaliyeed ee SIDRA Guuleed Saalax Barre ayaa sheegay muhiimada loo qabtay inay tahay, sidii kor loogu qaadi lahaa qiimaha wax qorista iyo wax akhriska, si loo helo mujtamac wax akhriya, waxna qora si looga baxo dhaqanka hadalka iyo fadhi ku dirirka.
Guuleed Saalax Barre wuxuu wax lagu faano ku tilmaamay in maalgelinta bandhigaan ay leedahay dowladda Puntland oo uu ugu horeeyo madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas, wuxuuna sheegay tilaabadaan inay meesha ka saarayso in taageero la weydiisto gacmo shisheeye.
Suugaan yahan Axmed Faarax Idaajaa oo ku hadlayay magaca qorayaasha kasoo qeyb galay munaasanadda ayaa uga mahad celiyay dowladda Puntand qabashada bandhigaan qaran, isagoo sheegay inuu la yimid labo buug oo sheekooyin ah oo uu doonayo in ay dadku iibsadaan si ay cilmi uga helaan.
Wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda Puntland Dr. Abshir Yuusuf Ciise ayaa bandhigaan ku tilmaamay fursad weyn oo uu qofku kaga heli karo cilmi kala duwan oo waxtar leh, sidoo kalena uu kula kulmi karo qoraayaashii cilmigaaga qoray.
Madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay bandhigaan inuu dirayo farriin ku saabsan, dhul amni ah oo lagu qaban karo bandhig iyo dad u heelan soo dhowaynta aqoonta.
Madaxweyne Gaas oo balanqaaday inay dowladdu iibsandoonto qeyb kamid ah buugaagta lasoo bandhigay ayaa shacabka ku dhiiri geliyay inay iyagana iibsadaan buugaagta, si ay dhiiri gelin ugu noqoto qoraayaasha waqtiga badan geliyay cilmigaan islamarkaana meel dheer ugasoo tagay inay Garowe kusoo bandhigaan.
Wuxuu sheegay madaxweynuhu shaqo la qabo inay ugu adag tahay qorista buugaagta, sidaas oo ay tahayna wuxuu tilmaamay inay aad u yartahay faa’idada laga helayo, balse wuxuu sheegay muhiimada ugu weyn inay tahay, in qorayaasha dhaxal qiimo leh uga tagaan dadkooda.
Bandhigaan ayaa socondooona muddo saddex cisho, waxaana jiridoo moqduucyo ay jeedindoonaan qorayaasha.